sal-dhigida Guud - Shiinaha Ningbo Ruking korontada
Qaababka Goynta Plotter
Qaababka Goynta plotte
Wax tolidda Machine Template Jarida
Jarida Fabric Machine Plotter
Advertising & xirxirida Industry Machine Jarida
System Jarida Head Auto Double
Advertising plotter goynta digital
Dhar plotter goynta
Auto-gudaha plotter goynta
magaabay wiil digital Furniture
bacda maqaar magaabay wiil digital
Baako plotter goynta
Ningbo RUK Technology Co., Ltd. waa ganacsi oo teknoolojiyad sare ku biiraan nidaamka qalabaynta Warshadaha, qalab iyo dayactir la xiriira, iyo sidoo kale ay set buuxa barnaamijka ee R & D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga guud ahaan.
Waxaan leedahay koox xirfadeed ka koobnayd dad karti iyo hufnaan leh, kuwaasoo post muhiim ah oo ku saabsan Waaxda, mashiinada, qalabka korontada, software computer kala iyo maamulka. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin iskaashiga barnaamijka ee R & D la jaamacad si fiican u ogaada gudaha iyo dibada, gaar ahaan keenay technology iyo khubaro Yurub. Waxaan madax banaan cilmi-baaris iyo in la horumariyo CAD / Cam dhafan nidaamka goynta NC, iyo sidoo kale xakamaysada ah iyo baabuur-wadidda dalbaday duurka qalabaynta. Products si ballaaran codsatay in warshado badan sida maqaar, kabo, dhar, kolay, baakadaha, caag wax dabacsan, wax xarunta, qalab iyo mashiinada electron. Si buuxda u hirgeliyaan Waxaan habka maareynta tayo ISO9001, waxaana ay badiyeen amar shahaado gudaha iyo dibada.
technology RUK sii maanka xaqiiqo iyo hal-abuurka sida ruux ganacsi, jecel sida fikrad adeegga. Waxaan kalsooni buuxda ku guuleysan doona Ammaantaada iyo kalsooni via tayo wanaagsan, adeegga daacad ah oo ka dhigi qiimaha ay macaamiisha ka yar dadaalka aan ugu jirno soo raynayn.
waqti Post: Mar-06-2018
technology RUK sii maanka xaqiiqo iyo inno ...